ပါဝါဘက်ထရီ Download – Android အတွက်ဘက်ထရီချွေတာ APK ကို | WikiWon
ပါဝါဘက်ထရီ Download – Android အတွက်ဘက်ထရီချွေတာ APK ကို
mujeer ဧပြီလ 30, 20170မှတ်ချက်များ
မင်္ဂလာပါယောက်ျားတွေ, ယနေ့ငါပါဝါဘက်ထရီသင်တို့အဘို့နှင့်အတူအကောင်းဆုံး android အကောင်းဆုံး application ကိုဝေမျှဖို့အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်, ဒီခေါင်းစဉ်ကို Power ဘက်ထရီနဲ့တူ, ဤလျှောက်လွှာကိုအချက်အလက်အားလုံးကိုရှိုးပွဲကိုအောက်တွင်သည်. ပါဝါဘက်ထရီသင့်မိုဘိုင်းဘက်ထရီသို့မဟုတ် Tablet ကိုကယ်ဖို့အလွန်ပါဝါချွေတာဖြစ်ပါတယ်, သငျသညျဤအချိန်အရာဟာ android သုံးပြီးခဲ့ပါ.
ပါဝါကိုဘက်ထရီ, တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘက်ထရီချွေတာ app ကိုအဖြစ်, အန်းဒရွိုက်ဖုန်းများသို့မဟုတ်တက်ဘလက်များအတွက်ပိုပြီးဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတက်ရနိုင်. ဒါကစမတ် app ကိုပါဝါချွေတာ mode ကိုစိတ်ကြိုက်၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထောက်ပံ့နိုင်, running-app ကို Optimizer, ဘက်ထရီပါဝါမော်နီတာ, မှတ်ဉာဏ်မန်နေဂျာ & ဒါကြောင့်အပေါ်သန့်ရှင်း. Power ကဘက်ထရီဟာပတ်ပတ်လည်၌သင်တို့၏ဘက်ထရီသက်တမ်းစီမံခန့်ခွဲ.
2 အားလုံးလင့်များအောက်တွင်အခမဲ့များအတွက် Download.
တိကျစွာရှိနေဆဲဘက်ထရီအချိန်ခန့်မှန်း သော authoritative စာတမ်းများ algorithm ကိုအပေါ် အခြေခံ., ဘက်ထရီအခြေအနေများအမျိုးမျိုးအောက်တွင်မည်မျှကြာမြင့်မည်ကိုပြောပြ (ဗီဒီယိုကိုကြည့်, Wi-Fi ကို / ကဘလူးတုသ်သို့မဟုတ်ပိတ်, စသည်တို့ကို) အားလုံး app များကိုစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကြောင်းနှင့်အာဏာသုံးစွဲမှု.
Power Saver & စောငျ့ရှောကျ & ဖျန်ထောက်လှမ်းခြင်း
မဟုတ်အသုံးပြုမှုရှိနေစဉ်ပါဝါတွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်သမျှသော apps များ detect နှင့်မြင့်မားသောစားသုံးမှု apps များနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူသတိပေး. သင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဘက်ထရီပါဝါတိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်ဘယ်လောက်ဆိုတာကိုပြသ 1 ကိုထိပုတ်ပါချွေတာ. အားလုံးအပြေး apps များ '' ပါဝါစားသုံးမှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် app ကိုမန်နေဂျာမှသင်အသေးစိတ်စာရင်းပြုစု. သင်၏ system junk ပိုပြီးဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ဖို့ကိုရှင်းလင်း.
မှတ်ဉာဏ် Optimizer သင့်ကိရိယာ၏မြန်နှုန်း accelerates. သင့်ရဲ့စမတ် device ကိုပိုကောင်းအောင်နှင့်သန့်ရှင်းရေး, ကချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နေစေ.
ပါဝါ apps များအားဖြင့်လောင်ခြင်းနှင့်မည်မျှအမျိုးမျိုးသော hardware အတွက်အချိန်ရရှိနိုင်ပါသည်ဘယ်လောက်သင်စာရင်း
ပါဝါကိုချွေတာ mode ကို Customize.
ပါဝါ Optimizer app ကိုအမျှ, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပါဝါ mode ကို customize ပါစေ(ထိုကဲ့သို့သောသို့မဟုတ်ပိတ်ကို Wi-Fi ကိုအဖြစ်, ဘယ်လောက်မျက်နှာပြင်အချိန်ကုန်ဒါပေါ်), ရေရှည်တွင်ပိုမိုအာဏာကိုကယ်ဖို့.
ပါဝါချွေတာ mode ကိုအလိုအလျောက်အကူးအပြောင်းများနှင့်အသုံးမ mode ကိုရှင်းလင်းဖို့အချိန်ဇယားနဲ့စောင့်ကြည့်. အလိုတော်မှာဘက်ထရီသက်တမ်းကိုသုံးပါစို့.
ပါဝါကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး function ကို Enabled, ပါဝါကိုဘက်ထရီအမြင့်ဆုံးစားသုံးမှု apps များ detect နှင့်အချိန်အတွက်အလိုအလျှောက်သူတို့ကိုပိတ်ဆို့နိုင်.
ရပ်ရွာ facebook မိတ်ဆွေများနှင့်ဒေသခံအသုံးပြုသူများအတွက်တစ်ဦးဆက်သွယ်ရေး platform ကိုဖြန့်ဖြူး, ပါဝင်သည်နေ့စဉ်ဘက်ထရီအစီရင်ခံစာ, အာဏာသုံးစွဲမှုအချက်အလက်, power-saving အချက်အလက်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးအချက်အလက်, စသည်တို့ကို. နေဖို့ပိုပြီးအံ့သြစရာ features တွေအဘို့အညှိ.
ပါဝါကိုဘက်ထရီအထင်မြင်မှားစေသော downloads, ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေကတိပြုပါတယ်. သင်တို့သည်ငါတို့၏အပြည့်အဝအရာရှိတဦးကမူဝါဒကရှာတှေ့နိုငျ.
ဤသည်က App ဖြစ်ပါတယ် 100% အခမဲ့ဘက်ထရီ Optimizer. အခမဲ့ကြိုးစားပါနှင့်သင့်မှာ Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုသစ်ကိုကဲ့သို့ပြေးရ!
အောက်ပါပြင်ပကြေးမုံသုံးပြီးဘက်ထရီချွေတာ v1.6.14 Download:
APK ကိုတစျခုမှာ Drive မှ Download
APK ကို SendSpace ကနေ Download လုပ်ပါ
Google Play ကနေဒီ app ကိုရယူပါ
ပါဝါကိုဘက်ထရီ - ဘက်ထရီ Saver
ဤမျှလောက်ဒီ app Love!!!! ဒါဟာငါ app ကိုရပ်တန့်နိုင်အောင် apps များငါ့အဘက်ထရီဖျန်ခဲ့ငါ့ကို poo ့ပြောတယ်. ဒါဟာအစငါသာ screen ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ငါ၏အဘက်ထရီကိုကယ်တင်နိုင်ကြောင်းပြောတယ် 1 ငါကယ်တင်ပြီမည်မျှမိနစ်ငါ့ကိုပြောပြပါလိမ့်မယ် thwn အချိန်. ဒီ app ကိုအစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံး app ကိုဖွစျဖို့ဆုံးဖြတ်!!!#
ငါသည်ဤတစ်နှစ်ထက်နောက်ဆုံးပိုပြီးထံမှ apps ကိုအသုံးသို့သော်အချို့ကိုသင်အချိန်ပါဝါဘက်ထရီရုတ်တရက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရပ်တန့်ထားပြီးဘက်ထရီမီတာလည်းစနစ်တကျအလုပ်မလုပ်ရပ်တန့်ပါဝါဘက်ထရီတိုးတက်စေမနိုင်
ဒီ app ကိုငါ့ဘက်ထရီရဲ့အသက်ရှည်သိသိသာသာတိုးမြှင့်ထားပါတယ်. အလွန်ဒီ app နှင့်အတူပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ငါကတွေ့ရှိခဲ့. / သတ်ပစ်ကြောင်းအများဆုံးကိုအခြားဘက်ထရီချွေတာ app များကိုဆန့်ကျင်အဖြစ် apps များ hibernate နိုင်ဖြစ်ခြင်းလုံးဝ app ကိုပိတ်ဖို့ Love. ထိုကဲ့သို့သောအကြီးအပလီကေးရှင်းကိုထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဝိုး။???? ဤသည် App ကိုယခုအထိအတော်လေးကောင်းလှ၏, ဒါပေမယ့်ဖွင့်ကိုငါ့လာမယ့်အားသွင်းလိုအပ်တဲ့အခါငါခံစားရပုံကိုကြည့်ရှုကြကုန်အံ့. အဲဒီအချိန်တုန်းကငါ 100% ငါ၏အပေးကမ်းလျှင်သေချာပါစေ5☆အပြစ်လွတ်နေသည်. Thnxs
Android App များ	android ဖုန်းအခမဲ့ download ပြုလုပ်ဘက်ထရီပါဝါကိုချွေတာ, ဒေါင်းလုပ် apk ချွေတာဘက်ထရီ, android ဖုန်းတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပါဝါချွေတာ app ကို, ပါဝါဘက်ထရီ apk, ပါဝါဘက်ထရီ app ကို, ပါဝါဘက်ထရီ download,, ပါဝါဘက်ထရီမိုဘိုင်း, ပါဝါဘက်ထရီစျေးနှုန်း	bookmark
ယခင်အပိုဒ် ဖျားနာ Cook ကအရသာအစားအစာနှင့်အချိုပွဲဟင်းချက်
next ကိုပုဒ်မ မင်းသမီးမိတ်ကပ်အလှပြင်ဆိုင်နှင့် Nice လှပစိန်ခေါ်မှု